Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Tonga hatrany Afrika Atsimo i Seychelles
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Safety • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Misokatra indray i Seychelles ho an'ireo mpandeha any Afrika Atsimo
Ireo mpitsidika avy any Afrika Atsimo dia afaka mitaingina sidina mankany amin'ireo nosy paradisa any Seychelles manomboka ny alatsinainy 13 septambra lasa teo, hoy ny fanambaran'ny minisiteran'ny fahasalamana any amin'ny ranomasimbe Indianina ny 11 septambra lasa teo.
Ireo mpandeha avy any Afrika atsimo, vita vaksiny na tsia, avela hiditra amin'ireo nosy tsy mila karokantine rehefa tonga.
Ny fepetra fidirana sy ny fijanonana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny toetran'ny vaksiny COVID-19.
Ny mpitsidika dia entanina mafy mba ho voan'ny vaksiny tanteraka alohan'ny dia ary mila manome porofon'ny fanandramana COVID-19 PCR ratsy natao tao anatin'ny 72 ora taorian'ny fiaingany.
Ao amin'ny fanavaozana ny Health Entry and Stay Conditions ho an'ny mpandeha (V3.5) farany, nesorina tao amin'ny lisitr'ireo “Firenena voafetra” i Seychelles, midika izany fa ireo mpandeha avy any Afrika Atsimo, vita vaksiny na tsia, dia avela hiditra amin'ireo nosy tsy misy mila quarantine rehefa tonga.
Raha ny filazan'ny mpanolo-tsaina dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fepetra vaksiny COVID-19 ny fepetra fidirana sy fijanonana, fa ny mpitsidika kosa dia ampirisihina mafy hanao tsindrona fiarovana alohan'ny fitsangatsanganana. Ireo mpandeha dia mila manome porofo amin'ny fitsapana COVID-19 PCR ratsy natao tao anatin'ny 72 ora taorian'ny fiainganana ary mameno fahazoan-dàlana ho an'ny fahasalamana. Mila manome porofon'ny fiantohana mandeha sy fahasalamana mandaitra izy ireo handrakofana ny quarantine, ny fitokana-monina na ny fitsaboana COVID-19.
Ireo mpitsidika avy any Afrika atsimo mahafeno ireo fepetra voalaza etsy ambony dia mety, raha mbola izy ireo ao amin'ny Seychelles, mijanona ao amin'ny orinasa fizahan-tany voamarina tsy misy farafahakeliny fijanonana amin'ny fananganana voalohany. Tsy mila maka mazàna andro 5 fanaraha-maso PCR Test2 izy ireo. Ny fepetra hijanonana ho an'ny ankizy hatramin'ny 17 taona, na inona na inona ny vaksiny dia ho an'ny ray aman-dreny / mpiambina miaraka aminy. Ireo mpitsidika izay efa tany Bangladesh, Brezila, India, Nepal ary / na Pakistan, ireo firenena izay mijanona ao anaty lisitra voafetra, ao anatin'ny 14 andro mialoha, dia tsy avela hiditra ao Seychelles.
Nandray ny vaovao ny tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany any amin'ny Ranomasimbe Indianina, ary nilaza ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fizahantany Sylvestre Radegonde fa faly amin'ny fisokafan'ny tsena indray izy ary "ireo fotoana natolotry ity tsena manan-danja ity, indrindra ho an'ny toeram-panjonoana manidina, ary mihoatra izany mankany amin'ny tsenan'i Amerika atsimo. Miaraka amin'ny 71% ny isan'ny mponina vita vaksiny tanteraka amintsika ary efa vita tsara ny vaksinin'ny tanora 12 -18 taona, Seychelles dia manao izay ilaina mba hitazomana ny mponina sy ny mpitsidika azy. ”
Seychelles dia toeran-kaleha tadiavin'ny Afrikanina Tatsimo, miaraka amin'ny 14,355 ny toerana halehany tamin'ny taona 2017. Ny valanaretina sy ny fameperana manaraka azy dia nahatonga ny fivezivezena ary avy amin'ny famoahana mpitsidika 12,000 talohan'ny areti-mandringana tamin'ny 2019, dia tonga latsaky ny 2,000 ny olona tonga tamin'ny taon-dasa. 218 hatramin'ny 5 septambra tamin'ity taona ity.
Na dia andevozin'ny morontsiraka sy ny dobo filomanosana aza dia mpizahatany tokoa ny mpandeha afrikanina tatsimo ary tia mizotra amin'ny làlan'ny natiora, ny fitsangantsanganana, ny snorkeling, ny antsitrika, ny sambo, dia maniry ny hihaona amin'ny mponina eo an-toerana ary handray anjara amin'ny hetsika ara-kolotsaina mandritra ny fialantsasatra.
Ny fanesorana ireo fameperana dia vaovao mahafaly ihany koa ho an'ireo tompon-trano maro atsy amin'ny Nosy Island monina any Afrika atsimo izay afaka hiverina any Seychelles miaraka amin'ny fianakaviany.
David Germain, talen'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany any Seychelles ho an'ny Africa & the America izay monina any Cape Town dia niarahaba tamim-pahazotoana ilay fanambarana. “Vaovao mahafinaritra ity, ny fahatongavan'ireo mpandeha afrikanina tatsimo niverina tany amorontsika dia efa ela. Ny mpitsangatsangana dia te-hijanona tsy hanana ahiahy ao anaty tontolo madio nefa mandritra ny fialantsasatra ary toerana inona no tsara kokoa noho ny any Seychelles amin'izao fotoana atokisana izao. Ny mpandraharaha fizahan-tany sy ny mpiasan'izy ireo dia samy nofanina hanina sy hampihena ny risika ateraky ny COVID-19, mamolavola ny protokolola mahazatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahefana ara-pahasalamana, hahazo mari-pahaizana COVID azo antoka. Any Afrika atsimo ihany dia efa natomboka ary atao manerana ny firenena ny vaksinim-bahoaka betsaka atsy Afrika Atsimo, ary izany dia miteraka fahatokisan-tena amin'ny dia, "hoy izy.
Ny biraon'ny fizahan-tany any Seychelles any Afrika Atsimo dia vonona miaraka amin'ireo hetsika ara-barotra voalahatra hotontosaina any Afrika atsimo sy any amin'ireo firenena afrikana hafa ao anatin'ny volana vitsivitsy. "Anisan'izany ny andiam-pivarotana sy ny hetsiky ny mpanjifa, miaraka amin'ny" Seychelles Africa Virtual Roadshow "no tena lahasa lehibe indrindra, hanomezana vokatra sy serivisy ary koa fanavaozana ny toro-hevitra momba ny dia lavitra ho an'ny vondrom-piarahamonina mpivarotra dia lavitra any Seychelles," hoy Andriamatoa Nanazava i Germain. Andiana fiofanana "Seychelles Virtual Destination Training", fitsangatsanganana an-gazety sy fitsidihana familiarization momba ny varotra fitsangatsanganana any Seychelles no kasaina amin'ny volana Novambra, ary koa ny doka amin'ny dokambarotra ho an'ny mpanjifa, ary ny ezaka fiaraha-miasa miaraka amin'ny varotra afrikanina Tatsimo.
Raha mila antsipiriany feno momba ny fitakiana dia tokony hijery ny mpitsidika rehetra advisory.seychelles.travel ary seychelles.govtas.com ary alohan'ny dia.
Raha misy fanontaniana fanampiny, mifandraisa [email voaaro] or [email voaaro]